पाथीभरा दर्शन गर्न गएकी एक तीर्थयात्रीको मृत्यु - Mero Mechinagar
उच्च हिमाली भागमा जाँदा जान्नै पर्ने कुराहरुः
भित्र धर्म / संस्कृति, पर्यटन / भ्रमण, राष्ट्रिय, स्वास्थ्य / जीवन शैली
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा माताको दर्शन गर्न आएकी एक महिला तीर्थयात्रीको आज मृत्यु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका –६ निवासी सावित्री खड्का चापागाईंको बेहोश भई निधन भएको हो ।
मन्दिरमै अचेत भएर ढलेपछि पाथीभराका कर्मचारी, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयवासीले स्टे«चरमा उहाँलाई बोकेर काफ्लेपाटीसम्म ल्याएको र त्यहाँबाट गाडीमा जिल्ला अस्पताल ल्याउँदा माथिल्लो फेदी प्राथमिक उपचार केन्द्रका उपचार सम्भव नभए पश्चात जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो ।
त्यहा पुगेपछि उनलाई पहिले नै मृत्यु भइसकेको चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए
तीस वर्षीया सावित्रा श्रीमान् मनिष चापागाईं, ससुरालगायत परिवारका पाँच जनासँगै दर्शनका लागि पाथीभरा गएका थिए ।
अत्यधिक चिसो भएकाले अक्सिजनसहित अस्पताल ल्याइए पनि बचाउन नसकिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनको चिसोका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाइएको छ ।
यो पनि जानौँ
के तपाईँ यसपटक ताप्लेजुङ्गको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? अनि तपाईँलाई त्यहाँ जाँदा लेक लाग्न सक्नेसम्भावना बारे कत्तिको थाह छ ? छैन भने थाह पाई राख्नु । किनकी पाथीभरा दर्शन गर्न जाँदा जोडिने अर्को पाटो हो लेक लाग्ने : स्वास्थ्य समस्या ।
३ हजार ७९४ मिटरको उचाईँमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तब्य पाथीभरा माताको दर्शन गर्न हरेक वर्ष दशौँ हजार बढी पर्यटक आउने गर्छन् ।
र हरेक बर्ष कतिपयको ज्यान जाने गरेको छ भने कतिपय सिकिस्त विरामी भएर हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका पनि छन् । ज्यान जाने र बिरामी हुने दुबैको कारण लेक लाग्ने समस्या हो ।
कतिपय जबर्जस्ति माथि जाने गरेको पाइन्छ तर त्यसो गर्दा पनि यो समस्याको जोखिम उतिकै वा झनै बढी हुन सक्छ।
यस्ता लक्षणलाई बेवास्ता गरी माथि उचाई चड्दा समस्या जटिल हुने र मस्तिस्क अनि फोक्सोलाई असर गरेर ज्यानै जानेसम्मको खतरा हुन्छ ।